October 2017 – Page3– Bachan Tv
Posted on October 27, 2017 October 27, 2017 by BACHAN TV
सम्राट् कन्स्टेन्टाइन आफै नै ख्रीष्टियान बने ।
कन्स्टेन्टाइन महान् रोमी साम्राज्यका सन्ताउन्नौँ सम्राट् थिए जसले ख्रिस्टाब्द ३०६-३३७ सम्म शासन गरे । मण्डली र साम्राज्य दुवैको इतिहासमा तिनको शासन परिवर्तनको निर्णायक बिन्दु साबित हुन पुग्यो । इतिहासकारहरू तिनलाई पहिलो ख्रीष्टियान सम्राट्को रूपमा हेर्छन् ।
ख्रिस्टाब्द २७२ तिर रोमी प्रान्त मोइसिया (आधुनिक युरोपेली मुलुक सर्बिया) मा कन्स्टेन्टाइनको जन्म भएको थियो । आफू बिरामी परेर मर्न लाग्दा पिता फ्लाभिअसले छोरो कन्स्टेन्टाइनलाई पश्चिमी रोमको सम्राट् बनाए । त्यसपछि तिनले ब्रिटेन, गउल र स्पेनमाथि शासन गर्न थाले । तिनले आफ्नो राज्यको सिमानालाई बढाए र जनताले तिनलाई असल शासकको रूपमा हेर्न लागे ।
तर गृहयुद्ध चर्किएपछि धेरै शक्तिशाली मानिसहरूले रोमी साम्राज्यलाई आफ्नो कब्जामा पार्न चाहे जसमध्ये एक थिए, म्याक्सिन्टस । तिनले आफैलाई सम्राट् घोषणा गरे । रोममा बस्ने यी स्व-घोषित शासकले रोम र इटालीमाथि कब्जा जमाए ।
कन्स्टेन्टाइन र तिनको सेना म्याक्सिन्टसको विरुद्धमा युद्ध गर्न अगाडि बढे । म्याक्सिन्टसको सेनाको आकारको तुलनामा कन्स्टेन्टाइनको सेनाको आकार झण्डै आधा भए तापनि २७ अक्टोबर ३१२ मा कन्स्टेन्टाइन महान्‌ले ख्रीष्टको दर्शन देखेका थिए जसमा तिनले ख्रीष्टको नाउँमा युद्ध गरे जित हासिल गर्ने थिए भनी तिनलाई बताइएको थियो । नभन्दै, तिनले युद्ध जिते र तिनी पश्चिमी रोमको एक मात्र सम्राट् बने भने लिसिनस पूर्वका सम्राट् बने । कन्स्टेन्टाइनले युद्धको सफलताको श्रेय ख्रीष्टियान परमेश्वरलाई दिए यद्यपि यसभन्दा अगि तिनले सूर्य देवतालाई पुज्ने गर्थे ।
मण्डली इतिहासमा ख्रिस्टाब्द ३१३ लाई एउटा महत्त्वपूर्ण साल मानिन्छ । यही सालमा पूर्व र पश्चिमका दुवै सम्राट्ले हस्ताक्षर गरेको मिलानको घोषणा जारी गरियो । अब ख्रीष्टियान धर्मले वैधानिकता पायो । रोमी साम्राज्यमा ख्रीष्टियानहरूलाई सताउन नपाउने भयो यद्यपि यसभन्दा अगि मनग्गे ख्रीष्टियानहरू ख्रीष्टमाथिको विश्वासकै कारणले सहिद बन्नुपरेका थिए । राज्यले देवी-देवताहरूलाई चढाउने पशु बलिले निरन्तरता पाएन; सम्राट्ले मण्डलीलाई उचित स्थान प्रदान गरे; तिनले मानवतावादी सुधारहरूको अनुसरण गरे; हरेक नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरियो; अगिल्ला सतावटहरूमा खोसिएका विश्वासीहरूका सम्पत्ति फिर्ता गरिए । सम्राट् कन्स्टेन्टाइन आफै नै ख्रीष्टियान बने ।
अनुगामी वर्षहरूमा थप कानुनहरू ल्याइए जुन ख्रीष्टियान मूल्य मान्यताहरूमा आधारित थिए । सबै मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको छ भन्ने बुझाइको कारणले दास र अपराधीहरूलाई निधारमा छाप लगाउने कार्यलाई निषेध गरियो; दासलाई क्रुसमा झुन्ड्याउने चलनको निर्मूलन गरियो; मान्छेले मान्छेको विरुद्धमा लडेर रगत बगाई मनोरञ्जन लिने खेललाई मनाही गरियो; अनपेक्षित शिशुहरूलाई मार्ने अभ्यासमा रोक लगाइयो ।
तर पूर्वका सम्राट् लिसिअसलाई राज्यका केही गतिविधिहरू मन परिरहेको थिएन । त्यसैले तिनले ख्रीष्टियानहरूलाई पुन: सताउन थाले । तर पश्चिमका सम्राट् कन्स्टेन्टाइन त्यसको विपक्षमा उत्रिए । कैयौँ युद्धहरूपश्चात् कन्स्टेन्टाइनले लिसिअसलाई पराजित गरे र ३२४ मा कन्स्टेन्टाइन एकीकृत रोमको शासक बने ।
सम्राट्ले कन्स्टेन्टिनोपललाई नयाँ राजधानी बनाए । झण्डै ६ वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको यो सहरले ३३० मा पूर्णता पाएको थियो । यो यति वैभवशाली थियो कि यसले रोमसँग प्रतिस्पर्धा गर्थ्यो । ख्रिस्टाब्द १४५३ मा यो मुसलमानहरूको हातमा नपरुञ्जेलसम्म यो मध्यकालभरि नै सर्वाधिक ठुलो सहर बन्यो ।
आफ्नो मृत्युको केही समयअगि मात्र बप्तिस्मा लिएका कन्स्टेन्टाइन ख्रिस्टाब्द ३३७ मा प्रभुमा सुते र तिनको शवलाई नयाँ राजधानीमा गाडियो । तिनको मृत्युमा विश्वले शोक मनाएको थियो ।
पोखरेली ख्रीष्टिय युवा संगती
Posted on October 26, 2017 October 26, 2017 by BACHAN TV
२ दिने आत्मिक सम्मेलन पोखरामा रहेको ख्रीष्टियान जवानहरुको समुह पोखरेली ख्रीष्टिय युवा संगतीले यही कार्तिक २र३ गते ए जवान तिम्रो मन कता पट्टी (मत्ती ८:३३) भन्ने प्रसंगमा नेपाल ख्रीष्टिय रामघाट चर्चमा सम्पन्न भयो । उक्त आत्मिक सम्मेलनको समउद्घाटन समाहरोहमा पोखरेली समुदायको अध्यक्ष पास्टर भविन्द्र राना लगाएत बरिष्ट अगुवाहरुको उपस्थित रहेको थियो । पोखरेली ख्रीष्टिय युवा संगतीको समउद्घाटन समारोहमा भुतपुर्व अध्यक्ष एल्डर राजु अधिकारी र समुदायको अध्यक्ष पास्टर भविन्द्र रानाले आफनो मन्तव्य राख्नुभएको थियो । उक्त सम्मेलनमा सिकाउनको लागी पहिलो दिन मेलिसीया बाट पास्टर पालन रामास्वामी ज्यु आउनुभएको थियो भने दोस्रो दिन पास्टर सुदेस गुरुड• ज्युले सिकाउनु भएको थियो । उक्त कार्यक्रमको संयोजनमा प्रकाश पौडेलले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको संचालन सचिव सुबास मसीहले गर्नुभएको थियो । उक्त सम्मेलनमा पोखराको विभिन्न चर्चहरुको २९० जना जवानहरुको सहभागीता रहेको थियो । अनत्यमा अध्यक्ष प्रकाश भुजेलले उपस्थित सबै जवानहरुलाई धन्यवाद दिई अन्तिम प्रार्थना गरी सम्पन्न भयो ।
३ दिने अगुवापन तालीम
हेटौंडामा ३ दिने अगुवापन तालीम सफल ३०० भन्दा बढीको सहभागी भएको ३दिने अगुवापन तालिम सम्पन्न भएको छ, नेपाल कमाने ख्रीस्टियन चर्चको आयोजनामा यो तालिम कार्तिक ६-८ सम्म भएको हो । मकवानपुरमा यश तालिमले राम्रो प्रभाव पारेको छ, हरेक बर्ष इस्राएलबाट आउनु हुने बक्ता पास्टर एन्ड्रु ले अगुवापनको बारेमा गहिरो शिक्षा दिनु हुने कार्यक्रम संयोजग पा. गोबिन्द कोइराला ले बताउनु भयो। यसरी ग्रामीण र ताराको जिल्ला लाई समेटेर तालिम संचालन गर्न पाएकोमा नेपाल कमाने ख्रीस्टियन चर्चका पास्टर तथा प्रायोजक अमित शर्माले खुशी व्यक्त गर्नु भयो । हेटौंडामा यस्तो अगुवा तालिम अत्यन्तै लाभदयक रहेको सहभागी बताउछन । बिगत १० बर्ष देखि भैरहेको यश कार्यक्रमको क्वायर मा पा. पुर्षोत्तम कोइरालाको टीमले सहायता गर्नु भएको थियो ।
नेपाल ख्रीष्टियान समाजद्धारा संविधान संशोधन माग
हामी २०१८ वर्षलाई जागृतीका बर्षको रुपमा लिएका छौं । साथै एडभोकेसी टुल्सको निर्माण गरेका छौं । सरकारलाई ध्यान आकर्षण पत्रमा ६ वुद्धे माग प्रेस गरेका छौं । ख्रीष्टियन समुदायलाई गरिने अति आवश्यक संवैधानिक, कानूनीक र नीतिगत व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।
पहिलो संविधानको संसोधनको माग गरिएको छ । धारा २६ को ३ धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने भन्ने विषय पूर्णरुपले हटाउने पर्ने, धारा २६ को १ सँग सम्बन्धित हरेक व्यक्तिले कुनै पनि विश्वास, धर्म छान्न, मान्न, परिवर्तन गर्न, गराउन, धर्म प्रचार गर्न, सिकाउन तालिम दिन अथवा छोड्न पाउनु पर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्ने । हालको व्यवस्थामा आफ्नो धर्म मान्न पाउनु पर्ने भन्ने छ तर आफ्नो धर्म के हो भन्ने परिभाषा निकै नै विवास्पद छ । संविधानको धारा ४ मा उल्लेख गरिएको धर्मनिरपेक्ष स्पष्टिकरणलाई हटाउनु पर्ने हाम्रो माग छ । भर्खरै फौजदारी २०७४ राष्ट्रपतिबाट सहीछाप गरि भद्रौ १ गतेबाट यो कानुन लागू हुनेछ । धारा १५६ ले हटाइनु पर्ने किनकि अरु देशमा अर्काको धार्मिक आघात पु¥याउने कानूनले धार्मिक युद्ध भएको इतिहास छ ।
यस्तै सोही ऐनको धारा १५७ र १५८ मा लिखितका गराउने लेखिए पनि यस्तो हुँदैन । कुनै पनि धर्म आफैमा परिवर्तन हुँदैन यसको लागि धर्म गुरुहरुले मात्र परिवर्तन हुन्छ । यसको मुल मन्त्र लुकेको छ । यो धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने नै हो । यो पूर्णरुपमा हटाइनु पर्दछ ।
धार्मिक संस्थालाई बेल्लै दर्ता निकाय हुनु पर्दछ । यो अल्प संख्य धर्मलाई सहायता पुग्दछ । धार्मिक कार्य समाज कल्याणले नगर्ने भएकोले राज्यले अर्को अवस्था गरिनु पर्ने माग नेपाल ख्रीष्टियान समाज रहेको छ ।
लोकान्तर डिजिटल पत्रिकाले यो क्रिष्टियन टुडेबाट लिएको नेपाली ख्रीष्टियनको बारेमा एक लेख ।
क्रिस्चियानिटी टुडेको अनलाइन संस्करणमा बुधवार केट शेलनटको बाईलाईनमा प्रकाशित समाचारमा क्रिस्चियन अल्पसंख्यकहरूकोे आस्थामा जोखिम परेको लेखिएको छ ।
समाचारको भावानुवाद यहाँ प्रस्तुत छ :
‘नेपाल सरकारले प्रतिगामी कदम चालेको छ किनकि यो कानूनले हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र हाम्रो धर्म वा विश्वासको स्वतन्त्रतामाथि कठोर नियन्त्रण गर्छ,’ क्रिस्चियन सोलिडारिटी वर्ल्डवाइडसँग कुरा गर्दै रिलिजियस लिबर्टी फोरमका अध्यक्ष टंक सुवेदीले बताए ।
सुवेदी एक पास्टर हुन् । पहिले हिन्दू अधिराज्यका रूपमा रहेको नेपालमा बस्ने अनुमानित तीन लाख ७५ हजार क्रिस्चियनमध्ये एक हुन् ।
गत अगस्ट महिनामा संसद्ले अपराध संहिता पारित गरेर सोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा यसले धर्मान्तरण र ‘धार्मिक संवेदनालाई चोट पु–याउने’ कामलाई नियन्त्रण गर्छ । यसो हुँदा जनसंख्याको ८० प्रतिशतले मान्ने हिन्दू धर्मलाई थप संवैधानिक संरक्षण दिलाउँछ ।
एक नेपाली क्रिस्चियन साइटअनुसार, नयाँ कानूनको एक दफामा कसैले पनि धर्मान्तरणमा संलग्न हुन वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
लामो समयसम्म हिन्दू अधिराज्यका रूपमा रहेको देशले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेको एक दशकपछि अनि नयाँ संविधान घोषणा गरेको दुई वर्षपछि धार्मिक स्वतन्त्रतामा संशोधित फौजदारी नियन्त्रण लगाएको छ ।
संविधानको धारा २६ ले पनि धर्मपरिवर्तनलाई निषेध गरेको छ ।
धार्मिक स्वतन्त्रताका पैरवीकर्ताहरूले यो कानूनमार्फत अल्पसंख्यकमाथि भविष्यमा थप नियन्त्रण र विभेद हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
क्रिस्चियन सोलिडारिटी वर्ल्डवाइडका संस्थापक मर्भिन टमसले नेपाल सरकारलाई यो कानून खारेज गर्न अपील गरेका छन् ।
यो कानून लागू भएसँगै पाकिस्तानको धर्मअपमान कानूनभन्दा खराब स्थिति नेपालमा आउने एक क्याथोलिक मानवअधिकारवादीले लेखे । यसलाई गलत व्याख्या गरेर कसैमाथि झुटो आरोप लगाउनका लागि यसको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने उनको चिन्ता छ ।
यो कानूनले नेपाललाई पञ्चायती व्यवस्थातर्फ फर्काउने स्थिति रहन्छ । त्यतिखेर राज्यले अल्पसंख्यक धार्मिक समूहलाई दमन गर्थ्यो ।
हालैका वर्षमा कानूनी जोखिमहरू बढ्दै गएको भएपनि विगत एक दशकयता नेपालमा क्रिस्चियन जनसंख्या तीनगुणा बढेको छ र धर्मपरिवर्तन यसको प्रमुख कारण हो । लोकप्रिय लोकगायक राजु परियार सन् २०१५ मा क्रिस्चियन भएका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि क्रिस्चियनहरू लगभग तीन करोड जनसंख्यामा जम्मा १.४ प्रतिशत छन् ।
अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले धर्मपरिवर्तनविरोध र धर्मअपमान कानूनलाई संसारभरि धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी सबभन्दा ठूलो चिन्ताको विषयका रूपमा लिएको छ ।
को हुन् टंक सुवेदी ?
नयाँ कानूनको विरोध गर्ने टंक सुवेदी ललितपुरको नक्खुस्थित फेमिली अफ गड चर्चका पास्टर हुन् । उनी नेपाल चर्च ड्टकम नामक क्रिस्चियन वेबसाइटमा लेखिरहन्छन् । सुवेदी रिलिजियस लिबर्टी फोरम नेपालका अध्यक्ष पनि हुन् ।
घर निर्माण गर्दै बेच्ने एउटा निर्माण कम्पनीमा वर्षौंदेखि काम गर्दै आएको एकजना कर्मचारी थियो । कम्पनीमा उसको जिम्मेवारी घर निर्माणको समयमा निरिक्षण/सुपरिवेक्षण गर्ने र काममा कुनै पनि कमीकमजोरी आउन नदिने थियो ।
बुढेसकाल लागिसकेका कारण अब जागिरबाट विदा लिने निष्कर्ष निकालेर एकदिन उ कम्पनीको मालिककहाँ गयो । उसको निर्णयले कम्पनी मालिकलाई स्तव्ध बनायो । मालिकले उसलाई बीचमै काम नछोड्न र कम्तीमा एउटा अर्को घरको काम सकेर मात्रै विदा लिन अनुरोध गर्यो । मालिकको यस्तो अनुरोधपछि उक्त कर्मचारी धर्मसंकटमा पर्यो । उसले आजसम्म कहिल्यै पनि मालिकको कुरामा नाइनास्ती गरेको थिएन । गह्रौँ मन गरेरै सही,त्यतिबेला पनि उसले हुन्छ भन्यो ।
भोलिपल्टदेखि उसले नयाँ घरको निरिक्षण र सुपरिवेक्षणको काम थाल्यो । छोड्ने निष्कर्षमा पुगेर पनि काम गर्नुपरेकोमा वाक्क भएको उक्त कर्मचारीले त्यो घरको काममा धेरै ध्यान दिएन । सुपरिवेक्षकले नै खासै ध्यान नदिएकाले उक्त घर न त राम्रो बन्न सक्यो न त बलियो नै ।
जे होस्, घरको काम सकियो । कर्मचारी फेरि मालिककहाँ पुग्यो र आफूले काम सकेकाले अबचाहिँ विदा दिन अनुरोध गर्यो । त्यसपछि आँखाभरी आँसु बनाउँदै मालिकले उसको मेहनतकाे लागि धन्यवाद दियो । धन्यवाद दिएपछि टेबलको ड्रयर खोल्यो र चाबीको झुप्पाे निकाल्यो । त्यस चावीको झुप्पो कर्मचारीको हातमा थमाउँदै उसले भन्यो, “तिमीले अन्तिममा काम गरेर बनाएको घर कम्पनीको तर्फबाट तिमीलाई उपहार !”
यति सुनेपछि उक्त कर्मचारी झसङ्ग भयो र आफूलाई यो कुरा पहिले नै थाहा भएको भए कति असल हुन्थ्यो भन्ने अफसोस गर्दै घर गयो ।
१) हामीले बोझ सम्झेका कतिपय कामहरू वास्तवमा हाम्रा निम्ति फाइदाका पनि हुन सक्छन् ।
२) जीवनका सबै कुराहरूको कारण वा जवाफ हामीलाई अहिल्यै नमिल्न पनि सक्छ । कारण वा जवाफ मिले पनि नमिले पनि हाम्रो जिम्मेवारीबोध गरी ती पूरा गर्नबाट हामी चुक्नुहुँदैन ।
पुनश्च: यो बिभिन्न व्यक्तिले बिभिन्न स्वरूपमा बिभिन्न शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गर्दै आएको कथा हो ।
ख्रीष्टियनलाई भ्रम छर्ने विज्ञप्ती
विश्वास (रामहरी) थापा
इसाई समाज एकता केन्द्र नेपालले आफ्नो लेटर हेडमा विवादास्पद विज्ञप्ती जारि गरी इसाई समुदायलाई भ्रम छर्ने काम गरेको छ । सो विज्ञप्तीमा बाम एकता (माओवादी केन्द्र र एमाले) लाई भोट हाल्न अनुरोध गरेको छ । पत्र नम्बर २०७४÷२०५ मा हार्दिक अपिल भन्दै हातले लेखेको विज्ञप्ती सामाजिक संन्जालमा भाइरल भइरहको छ । धेरैले यसको घोर विरुद्ध गरेका छन् । कार्तिक ८ गते प्रकाशित सो विज्ञप्तीले पूर्व महासचिवको हस्ताक्षर गरेका छन् ।
केही समय अघि रामप्रसाद न्यौपाने जनजागरण पार्टी छोडेर नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेका थिए । स्रोतले बताउछ, बाबुराम भट्टराई नेपाली कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि उनीलगायत केही उनका साथीहरु बाम एकतातिर लागेका हुन ।
यस विषयमा राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघका अध्यक्ष सिवी गहतराजले भने, “इसाई समुदायलाई मुछेर राजनीतिक च्याखे थाप्ने काम भएको छ । धार्मिक समुदायमाथि टेकेर राजनीतिरुपमा माथि पुग्ने दिवा सपना मात्र हुनेछ । यो ख्रीष्टियन समुदायको कुनै आधिकारीक प्रतिनिधीकमूलक निकाय होइन । यसको कुनै तुक छैन । यस्तो भ्रममा नपर्नको लागि समस्त इसाई समुदायलाई आग्रह गर्दछु ।”
यस्तै ख्रीष्टियान समाज नेपालका सह अध्यक्ष टंक सुवेदीलाई जिज्ञासा राख्दा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो । यदि यस्तो भएको भए उपयुक्त होइन, चर्चमा सबै खाले राजनीतिक दलका मानिसहरु हुन्छन् यसरी अनुरोध गर्न मिल्दैन ।
रामप्रसाद न्यौपानेलाई उहाँको मोबाइल सम्पर्क गर्दा फोन उठाउनु भएन ।
उनले फेसवुकबाट यसरी लेखेका छन् :-
राजतन्त्र र भ्रष्ट्रचारको आडमा लामो समय कुशासन गरिरहेको कांग्रेसको ” “रूख” र बैकल्पिक शक्तिका नाममा मागि खाने भाँडो बनाऊँदै कांग्रेसको पुच्छर वादी आडमा निर्वाचनमा होमिएको नयाँ शक्तिको “आँखा” चिन्हमा मतदान नगर्न देशभर रहनुभएका क्रिश्चियन समुदाय ( चर्च ) का सम्पूर्ण पास्टर/ अगुवा तथा बिश्वासी सदस्य सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं । लोकतान्त्रिक गठबन्धन भारतिय गुरुयोजना र राजतन्त्रको पुनराबृतिका लागि मात्रै भएकोले देशलाई धार्मिक दन्द्धको बिजारोपण गराउने षड्यन्त्र मुलुक गठबन्धन भएको सबैमा जानकारी अवगत गराउन चाहन्छौं ।
यसर्थ :मा राष्ट्रिय रक्षा, धार्मिक स्वतन्त्रता न्याय समानता र दिगो बिकासका लागि एेतिहासिक बाम गठन्धनलाई सहयोग गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । बाम गठबन्धनको चुनाव चिन्ह प्रतेक्ष तर्फबाट गोलाकारभित्रको हँसियाहथौडा र सुर्यमा र समानुपातिक तर्फबाट माओवादी केन्द्र को गोलाकारभित्रको हँसियाहथौडा चुनाव चिन्हमा निश्पक्ष मतदान गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
राष्ट्रिय ईसाई समाज एकता केन्द्र नेपाल
आँखाबाट आँसु झार्दै तिनले आफ्नो जीवन येशूको पाउमा सुम्पे
१५ वर्षको उमेरमा तिनी याले विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरे । तिनको आत्मिक जीवन कमजोर भएकोले तिनी सजिलैसित पापका खाडलहरूमा फसे । तिनी उत्ताउला थिए; मण्डलीमा उपस्थित हुन्थे; प्रार्थना सभामा उपस्थित हुन्थे; बाइबल पढ्थे; आफै प्रार्थना गर्थे र पनि तिनले परिवर्तित जीवनको महसुस गरेका थिएनन् । तिनले साँचो खुसी पाएका थिएनन् । तिनी पापको गहिराइतिर जाँदै थिए ।
एक रातको कुरो हो । तिनी होटलको कोठामा थिए । तिनी सुत्न सकेनन्; जीवनदेखि थाकेका थिए । तिनले गोली हानी आत्महत्या गर्नेसम्मको सोच पनि बनाए ।
तर तिनकी आमाले भनेका वचनहरू तिनको मनभित्र नाच्न थाले जसले तिनको साँचो परिवर्तनको लागि प्रार्थना गरिरहेकी थिइन् । पवित्र आत्माले तिनलाई दोषी ठहराउनुभयो र तिनले घुँटा टेके । तिनको अन्धकारपूर्ण ह्रदय परमेश्वरको प्रेमको ज्योतिले भरियो । आँखाबाट आँसु झार्दै तिनले आफ्नो जीवन येशूको पाउमा सुम्पे र तिनले नयाँ जन्म पाए ।
को थिए तिनी ? तिनलाई दुनियाँले आर. ए. टोरीको नाउँले चिन्छ । तिनी अमेरिकाकै प्रभावशाली सुसमाचार प्रचारक, पास्टर, शिक्षाविद् र लेखक बने ।
४० भन्दा बेसी पुस्तकका लेखक टोरीले १९०७ मा ह्विटन कलेजबाट मानार्थी विद्यावारिधि पाएका थिए । हजारौँ मानिसलाई ख्रीष्टमा जित्न सफल टोरीले स्थापना गरेको बाइबल स्कुललाई हाल बायोला विश्वविद्यालय भनेर चिनिन्छ जुन संसारभरि परिचित छ ।
७३ वर्षको दीर्घायुमा २६ अक्टोबर १९२८ मा यस धरतीबाट बिदा भएका टोरीले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको बारेमा यसो भनेका छन्, “यो पुस्तकलाई संसारबाट निर्मूलन पार्नको लागि मानवीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र, चतुरता, तर्क वा क्रुरताको हरेक उपकरण जुन यसको विरुद्धमा ल्याउन सकिन्थ्यो अठार शताब्दीसम्म त्यो ल्याइएको भए तापनि यसले पहिलेभन्दा अहिले संसारमा अझै शक्तिशाली ढङ्गमा पकड जमाएको छ । यदि यो मानिसको पुस्तक थियो भने यसको निर्मूलन भइसक्नेथियो र सैयौँ वर्ष पहिले नै यो गायब भइसक्थ्यो ।”
Posted in Reason to Believe1 Comment on आँखाबाट आँसु झार्दै तिनले आफ्नो जीवन येशूको पाउमा सुम्पे
तामाङले कार दिएपछि सार्वजनिक गरे भिडियो
Posted on October 25, 2017 October 25, 2017 by BACHAN TV
पछिल्लो समय आफ्नो आत्मिक पाष्टरलाई कार उपहार दिएपछि सकारात्मक तथा नकरात्मक दुबै प्रतिक्रिया आइरहेको छ । उनले पछिल्लो समयमा यो कार्यले नेपाली इसाई समाजमा नौलो तरङ आएको छ ।
धरानस्थित इमप्याक्ट जेनरेशन इन्टरनेशनल मिनिष्ट्रि तथा चर्च (आइजीएम) का संस्थापक÷ पा. शामुएल तामाङले १ कार्तिक उपहारस्वरुप नयाँ कार मारुती सुजुकी किनेर दिएका छन् । पाष्टर साइमन सुब्बा विरामी भएकोले सो कार्यक्रममा उहाँको धर्मपत्नी लगायत उहाँको परिवारलाई तामाङले कारको साँचो दिइ हस्तारण गरेका थिए । पछिल्लो समयको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ ।